Ny Ethiopian Airlines dia manomboka miasa sidina miaraka amin'ny ekipa vita vaksiny feno
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Ethiopia » Ny Ethiopian Airlines dia manomboka miasa sidina miaraka amin'ny ekipa vita vaksiny feno
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba an'i Ethiopia • Vaovao momba ny fahasalamana • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Ethiopian Airlines dia nividy sy nanafatra tifitra vaksin maherin'ny 37,000 ho an'ny mpiasa sy ny mpiara-miasa aminy.
Mampandeha sidina miaraka amin'ny ekipa vita vaksiny feno miady amin'ny COVID-19 ny Etiopiana mba hiarovana ny mpandeha.
Hentitra ny fampiharana ny fepetra fisorohana ny COVID-19.
Nanangana ivon-toeram-pitsapana sy fitokana-monina manokana i Etiopia.
Ny vondrona etiopiana Airlines, mpitatitra entana lehibe indrindra atsy Afrika, dia nanomboka nanidina sidina niaraka tamin'ny ekipa vita vaksiny feno miady amin'ny COVID-19 mba hiarovana ny mpandeha hatrany amin'ny areti-mandringana.
Ethiopian Airlines Tale jeneraly tarika Andriamatoa Tewolde GebreMariam dia nilaza fa “Faly izahay manao sidina miaraka amin'ireo ekipa vita vaksiny feno - dingana lehibe iray hiarovana ny fiarovana ara-pahasalaman'ny mpiasanay sy ny mpanjifantsika. Amporisihina isika amin'ny fitombon'ny isan'ireo mpandeha mandeha amin'ny asa aman-draharaha, VFR ary fizahan-tany tohanan'ny fahatokisan'ny fanaovana vaksiny manerana an'izao tontolo izao. Nifantoka tanteraka tamin'ny fiasana mafy izahay mba hiantohana ny fiarovana ny mpiasa sy ny mpandeha anay hatramin'ny
nipoaka ny areti-mandringana ary izany dia porofo iray hafa amin'ny fanolorantsika tena hatrany. Izahay dia nividy sy nanafatra tifitra vaksin maherin'ny 37,000 ho an'ny mpiasa sy ny mpiray antoka aminay. ”
Hentitra ny fampiharana ny fepetra fisorohana ny COVID-19
ao anatin'izany ny fananganana ny foibem-pitsapana sy fitokana-monina ary ny fanaovana nomerika azy
fandidiana ankoatra ny hafa. Io no lohalaharana tamin'ny ady amin'ny areti-mandringana mitondra fanafody ilaina sy vaksinim-panafody manerantany ary koa ny fampodiana ireo olona tratra an-trano hiverina any an-tranony.
Ny zotram-piaramanidina etiopiana, ny zotram-piaramanidina etiopiana teo aloha ary matetika antsoina hoe Etiopiana tsotra, dia mpitondra sainam-pirenen'i Etiopia ary tompon'ny governemanta manontolo. Niorina tamin'ny 21 Desambra 1945 ny EAL ary nanomboka niasa tamin'ny 8 aprily 1946, nanitatra ny sidina iraisam-pirenena tamin'ny 1951.